मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि कम्पनी छनौट प्रकृया अलपत्र, यस्तो छ कारण - Technology Khabar
» मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि कम्पनी छनौट प्रकृया अलपत्र, यस्तो छ कारण
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि कम्पनी छनौट प्रकृया अलपत्र, यस्तो छ कारण
Technology Khabar ८ श्रावण २०७५, मंगलवार
अनुज राज । काठमाडौं । मोबाइल डिभाइसहरुको नियमन र परिक्षण गर्नका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले शुरु लागू गर्न लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको काम अलपत्र परेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणले यो वर्षभित्रै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) लागू गर्ने योजना राखेपनि यसको काम हाल अलपत्र परेको हो ।
दूरसंचार प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा यसको प्रकृया रोकिएको हो । यसअघि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिर्घकालिन असर पर्ने निर्णय नगर्ने पत्र पठाउँदै दूरसंचार प्राधिकरणमा सबै कामहरु रोकेको थियो भने त्यसलगत्तै अध्यक्ष र एक सदस्यलाई पदमुक्त गरेको थियो । जसले गर्दा यहि छिटो भन्दा छिटो शुरु गरिने भनिएको एमडिएमएसको प्रकृया अलपत्र परेको हो ।
यसको लागि प्राधिरकरणले कम्पनी छनौटको लागि गत मई ११ तारिखमा आशयपत्र खुलारुपमा माग गरेको थियो जसमा १३ कम्पनीहरुले सो एमडिएमएस संचालनमा ईच्छा देखाएका थिए । तर आवेदन दिएकाहरुमध्येबाट एक कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने प्रकृया भने रोकिएको हो ।
त्यसबेला एक महिनाभित्र योग्य कम्पनी छनोट गरिने बताईएपनि हालसम्म कम्पनी छनौट हुन सकेको छैन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले आन्तरिकरुपमा छनौटको गृहकार्य सकिएको जानकारी दिए ।
‘हामीले एमडिएमएस संचालनका लागि आवेदन दिएकामध्येबाट उत्कृष्टहरुलाई छनौट गर्ने कार्य आन्तरिकरुपमा सकेका छौं, सोहि आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने हो,’ उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।
उनकाअनुसार आवेदकहरुमध्येबाट पहिलो चरणमा ३ देखि ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गरिनेछ ।
किन रोकियो प्रकृया ?
तर बोर्ड बस्नका लागि आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली हुँदा कहिले बोर्ड बस्ने हो भन्ने ठेगान छैन् । नयाँ अध्यक्षका लागि खुला आवेदनअनुसार प्रकृया पुरा गर्ने हो भने पनि करिब महिना दिन लाग्नेछ । जसको लागि सरकारले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत खुला आवेदन माग गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अहिलेसम्म भएको छैन् ।
त्यस्तै प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाललाई अध्यक्षको जिम्मेबारी दिईएपनि उनलाई मन्त्रालयले नियमित र दैनिक कार्यको जिम्मेबारी मात्र दिएको छ ।
सामान्यरुपमा एमडिएमएसको जिम्मा लिने कम्पनी छनौट २० दिनभित्रमा गर्न सकिन्छ भने त्यसको आधारमा नै बोर्डले केहि दिनमा नै कम्पनी छनौट गर्न सक्दछ । यस्तो कम्पनी छनौट गर्दा कम्पनीको प्राविधिक र वित्तिय अनुभवको आधारलाई मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।
हाल आवेदन दिएका १३ कम्पनीहरुमध्येबाट ३ देखि ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गरिनेछ । त्यसपछि ती कम्पनीहरुसँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर त्यसमध्ये उत्कृष्ट १ कम्पनीलाई छनौट गरिन्छ । जसको लागि प्राधिकरणका अनुसार करिब १ महिना लाग्दछ ।
कम्पनी छनौट गर्दा क्वालिटी कस्ट वेस्ट सेलेक्सनको आधारमा गरिन्छ । जसको लागि करिब १५ दिनमा उत्कृष्ट १ कम्पनी छनौट गर्न सकिन्छ ।
त्यसरी छनौट भएको कम्पनीले आफूले तोकेको लागतमा एमडिएमएसको लागि डिजाइन, विकास, इन्स्टल र संचालन प्रकृया शुरु गर्दछ जसको लागि करिब ४ महिनासम्म लाग्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार नियमित प्रकृयाअनुसार नै एमडिएमएस संचालको लागि कम्पनी छनौट गर्नका लागि मात्र २ महिनामा सम्झौता र अर्को ६ महिनामा सेवा शुरु हुनसक्दछ ।
तर प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुनु र वरिष्ठ निर्देशकलाई दैनिक कामकारबाहीको मात्र जिम्मेबारी तोकिनुले एमडिएमएस शुरु गर्ने प्रकृया अन्यौलमा परेको हो ।
के हो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस)?
करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार गर्न लागिएको एमडिएमएसले मुलुकभित्र रहेका प्रत्येक मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रयोग, विदेशबाट आयात हुने तथा बजारमा रहेका मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्नेछ । यसले मोबाइल सेटको परिचय दिने आइएमइआई नम्बरको दर्ता गरेर सम्पूर्ण मोबाइल ह्यान्ड सेटको जानकारी संकलन गर्नेछ । यो प्रणालीले कम्तीमा १० करोड आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिनेछ ।यो प्रणालीमा आईएमईआई नम्बर राखिएका हरेक डिभाइसहरुको दर्ता र रेकर्ड हुनेछ ।
यो प्रणालीमा दर्ता भएका आईएमईआईको आधारमा तीनवटा सूची बनाईने छ । जसमा ह्वाईट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट हुनेछ । ह्वाईट लिस्टमा हुने मोबाइल ह्यान्ड सेट प्रयोग गर्न पाईने र वैधानिक हुनेछन् । त्यस्तै ब्लाक लिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध भएका नम्बरहरु राखिने छ भने दर्ता भएका तर प्रयोग गर्न नमिल्ने, उजूरी परेर छानबिन हुँदै गरेका तथा संकास्पद नम्बरहरु ग्रे लिस्टमा रहने छन् ।
सिस्टम संचालनमा आएपछि ह्वाइट लिस्टमा राखिएका आइएमइआई नम्बरको ह्यान्डसेट मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। हराएका, चोरी भएका मोबाइल ह्यान्ड सेट ट्र्याकिङ र ब्लक गर्न सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
कुन कुन कम्पनीले दिए आवेदन ?
सिक्याप स्वेज एजी, स्विटजरल्याण्ड
इन्भीगो अफ शोर एसएएल, लेबनान र एफ वान सफ्ट इन्टरनेशनल प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर
भायामटेक टेक्नोलोजीज लिमिटेड इण्डिया र सिक्स डि टेलिकम सोल्यूशन प्रालि इण्डियाको ज्वाइन्ट भेन्चर
न्यूमेरा(एम) एसडीएन.बिएचडी. मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर
मोबिल्यूम इन्क यूएसए
माभेनिर सिस्टम लिमिटेड यूके र साइटस कम्यूनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर
चाइना क्वालिटी सटिंफिकेसन सेन्टर, चाइना
स्पाईस डिजिटल लिमिटेड, इण्डिया
टिटिजी यूलुस्लारारासी टेलिकोमिनिकास्योन इलेटिसिम हाइजमेलेरिभ इलेक्ट्रोनिक टिआईसी लिमिटेड, टर्कि, एडनोन बिलिसिमभेलिटासिमटेक सान भे टिक, लिमिटेड एसटिआई टर्की, टेलेनिटि इलेटिसिम सिस्टमलेरी सान टिक ए एस टर्की र प्रोफेसनल कम्यूटर सिस्टम प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर
पोर्टिग एक्सेस बि भी नेदरल्याण्ड र कल क्रेडिट ग्रुप यूकेको ज्वाइन्ट भेन्चर
जेनस्पेर इन्टरनेशनल लिमिटेड इण्डिया
मोबिलोन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि नेपाल इन्फ्रा डाटा एन भी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोल्यूशन प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर
सिम्ब्रेला ग्रुप बि भी नेदरल्याण्ड
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५, मंगलवार
नयाँ रुपमा आयो लोकप्रिय गेमिङ्ग एप ‘टकिङ्ग टम’, बच्चाहरुलाई भर्चुअल संसारमा लैजाने
इन्स्टाग्राममा ४ घण्टासम्म लाइभ भिडियो बनाउन सकिने, इन्स्टा लाइभ भिडियोको लागि नयाँ फिचर
२३ कार्तिक २०७२, सोमबार
दूरसंचार प्राधिकरणले भन्यो- विदेशी अपरिचित नम्बरबाट आएको फोन कल नउठाउनु